Suuqgeynta Fiidiyowga: Cadeynta Bulshada ee Nambarada | Martech Zone
Suuqgeynta Fiidiyowga: Caddaynta Bulshada ee Lambarada
Khamiista, Oktoobar 17, 2013 Sabtida, Janaayo 23, 2021 Douglas Karr
Maanta waxaan la kulmayey macmiil oo aan kala hadlayey fursadda ay u leeyihiin inay kaga guuleystaan ​​tartamayaasha internetka iyagoo adeegsanaya fiidiyoow.
Shirkaddu waxay leedahay summad adag oo lagu kalsoon yahay khadka tooska ah shaki kuma jiro in wax soo saarka fiidiyowga uu wadi doono taraafikada tooska ah, taraafikada raadinta badan iyo - ugu dambeyntii - ka caawiyo iyaga inay si fiican u sharxaan qiimaha ay ugu qoran yihiin adeegyadooda rajadooda.
Fiidiyowgu wuxuu caan ku yahay dhagaystayaasha guud ahaan adduunka. Marka ay jirto lacag la samaynayo, qof kastaa wuxuu isku dayaa inuu qaado qayb ka mid ah suuqgeynta fiidiyowga Baay dhadhan Qaarkood xitaa waxay isku dayaan inay dubtaan tooda.
Websaydhada leh istiraatiijiyad suuq geyn fiidiyoow wanaagsan waxay kordhisay suuragalnimada in lagu qoro bogga koowaad ee natiijooyinka Google iyadoo ilaa 53 jeer.
Liisaska fiidiyowga ee ka muuqda raadinta waxay la kulmaan sida ugu badan Boqolkiiba 41 boqolkiiba ka sarreeya marka loo eego marka loo eego tartamayaashooda.
Tags: ujeedkaheerka-riixctrforrestervideo ctrsuuqgeynta fiidiyowgasuuq geynta fiidiyowgasuuq geynta fiidiyowgastats suuq geynta fiidiyowgaserp video
Helitaan - 21 Xeerar Cusub oo Suuqgeynta Mawduucyada ah
Oktoobar 17, 2013 at 8:38 PM
Qaybtayda markay tahay Google Analytics, bog degitaan leh fiidiyoow gaaban laakiin macaan ayaa shaqeeya! Maaddaama ay muujisay inay leedahay heer aad u hooseeya oo ka soo kabasho ah marka la barbar dhigo bogagga kale ee boggeena oo leh qoraallo dhaadheer.